Textile Auxiliary Vagadziri - China Textile Auxiliary Factory & Suppliers
Shandisa: Fluffing Silicone emulsion PR160 yakasarudzika organic silicone emulsion uye yakakosha zvinhu zvakasviba zveiyo yakaoma system yeKukwidza Mumiriri wejira rakabikwa. Inogona kushandiswa Kurera, Kuveura & Kukurisa kupedzisa yekotoni, T / C, polyester, nylon uye machira ayo akasanganiswa. inopa chigadzirwa chakatsiga, chakapfava, chakatsiga uye chakavanzika kumuti wakasimudzwa. Iyo inogona kushandiswa pamwe chete neFlake emulsion mune zvakasiyana zvakasiyana zvichienderana nemamiriro emucheka.
Kuonekwa: Milky chena mvura
Solid zvinyorwa: 60%
Dhizaha yekushandisa mafuta akasiyana-siyana
Shandisa: Deoiling mumiririri, Detergent, low foam, biodegradable, isina-chepfu, haina zvinhu zvinokuvadza, kunyanya
inoshandiswa mune inoyerera-jet; Performance:
Detergent 01 idhiraivha iyo ine yakasimba emulsification kugona kwezvakasiyana
mafuta ekuzora anowanzoshandiswa pakubata sindano. Inonyanya kukodzera kurohwa kwe
Yakatemwa machira uye yakasanganiswa.
Detergent 01 ine yakanaka yekugeza yekusona uye anti-redeposition athari pa wax uye yakasikwa
parafini iri mukati me fiber.
Detergent 01 yakagadzikana kune asidhi, alkalis, kuderedza vamiririri uye oxidants. Inogona kushandiswa mukati
acidic kuchenesa maitiro uye kusanganisa bhati nemhando dzakasiyana dzevachena.
Detergent 01 inogona kushandiswawo mukukuvadzwa kuita zvinhu zvakagadzirwa
tambo, kusona tambo uye yarns
iri block silicone inonatsa; inogona kushandiswa mumachira akasiyana-siyana senge machira uye masikisi awo, rayon, viscose fiber, synthetic fiber, silika, mvere, etc. Inonyanya kukodzera kugadzirwa kwekugadzira fiber, nylon & spandex, polyester plush, polar fleece, coral velvet, PV velvet uye
machira emvere. Iyo inogona kupa machira neakapfava, akanyorova, fluffy uye akaderera yellowing.
● Kutaridzika Transparent yero mvura
● Ionic chisikwa chisina kusimba cationic
● Zvakasimba Zvakawanda 60%
Acidic Kuderedza Kuchenesa Agent PR-511A
iri nzvimbo yakasarudzika inokosha mumiriri, iyo ine zviri nani kuderedza
huwandu mune hwakawanda hwakasiyana hweUP kukosha. Iyo inogona kutsiva (sodium hydrosulfite + caustic soda) ye
kudzoreredza kuchenesa kwepolyester nemachira ayo akasanganiswa mushure mekuita dhayeti, bvisa yakanyura ruvara, simbisa
kukurumidza kwemavara kwemucheka
PH Kukosha: 7 ~ 8 (1% yemvura mhinduro)
Solid zvinyorwa: 22%
hydrophilic silicone yakanyorova 8850N
iri micro-emulsion, inoshandiswa senge hydrophilic softener yekotoni nemucheka wayo wakasanganiswa kana thauro nehurefu, nyoro, fluffy, hydrophilic uye kugadzikana kwakanaka.
is polyoxyethylene polymer tata, iyo inoshandiswa antistatic kupedzisa polyester, acrylic, nylon, silika, mvere uye mamwe machira akasanganisa. Iyo yakarapwa fiber pamusoro ine yakanaka wettability, conductivity, anti-stain, guruva kuramba, uye inogona kuvandudza anti-fuzzing uye anti-mapiritsi kushanda kwemucheka.